Ottm Apple Watch straps ka ejiri 100% osisi mee | Esi m mac
Jesus Arjona Montalvo | | Apple Watch, Noticias
N'ihe banyere teknụzụ dị ka Apple Watch na ọtụtụ ndị smartwatches ndị ọzọ, moda na-arụ ọrụ dị oke mkpa na mpaghara a. Nke a abụghị naanị ihe ị na - ebu n’akpa na n’akpa gị oge niile, ọ bụ ihe ị na - eyi. Maka nke a, ụlọ ọrụ na-ebupụta mkpọsa na Indiegogo maka eriri ọhụrụ maka Apple Watch, nke emere ya kpamkpam osisi, na ha akpọwo ya ottm.
ottm ga-abata ụdị osisi dị iche iche ma Apple ese si 38 mm y 42 mm, yana smartwatches ndị ọzọ, ma dị ejiri mee iji jide n'aka na ha kachasị elu àgwà enwere ike.
1 Ottm: ụdị eriri ọhụrụ maka Apple Watch gị
2 Lee ụfọdụ ihe atụ
Ottm: ụdị eriri ọhụrụ maka Apple Watch gị
ottm ọ bụ eriri ebe ịpụ iche na mma na-ezute. Mgbe ị na-eche banyere ihe dị ka teknụzụ dị elu dị ka Apple Watch, ọ ga-abụrịrị na ọtụtụ n'ime gị ga-eche maka eriri aka a ga-eji ụdị ọla ma ọ bụ fechaa dị n'ihu.
Ottm na-eme ka Apple Watch gị nwekwuo okike, na-eji ihe okike eme ihe n'ụzọ kachasị dị mfe. Eriri ma ọ bụ agbụ ndị a ejiri mee ha abata maple, osisi aja sandwood, na ụdị dị iche iche nke Zebrawood (Onwe m amaghị ụdị osisi ọ bụ), ha na-agbanwe agbanwe dịka ogwe igwe igwe Apple.
Maple Ottm maka Apple Watch
Iji osisi maple nwere agba nwere otu ọkụ. Ị nwere ike họrọ agba agba gbara ọchịchịrị maka Apple Watch gị.
Sandalwood Ottm maka Apple Watch
Na Sandalwood ọ na - ewe ụwa niile kachasị mma, ndị ngwakọta nke agba ọkụ na ndị gbara ọchịchịrị. N'uche m, nke a bụ otu n'ime onyinye kachasị mma. Agba agba na-echetara m osisi mkpụbe osisi nke batara n'ụgbọ ala okomoko.
Zebrawood Ottm maka Apple Watch
Nke ikpeazụ n'ime nhọrọ osisi Ottm ga-abụ Zebrawood, nke nwere oji ojii na-agba ohia.
N'ihi na eriri ottm na-adị ejiri si osisi siri ike mee, ọ bụghị ngwaahịa dị ọnụ ala. Gaghị ahụ ụdị ihe a mma y ziri ezi na mpaghara gị ụlọ ahịa, na adịchaghị na ngwaahịa na-aga na-na elu ahịa dị ka a N'ihi. N'akụkụ aka nke ọzọ, ha adịghị ọnụ karịa eriri belt Apple na ìgwè ọhụrụ naịlọn.
Ndị a bụ ụfọdụ ọnụahịa dabere na osisi ị na-eji yana maka ụdị Apple Watch ha sitere $ 25 elu $ 99Ná ngwụsị nke isiokwu anyị hapụrụ gị njikọ iji zụta ha.
A ga-enwekwa ụfọdụ ngwugwu amụọ dịịrị onye ọ bụla chọrọ nke ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ dị ha mkpa ịgbakwunye na ndepụta Ottm email maka nduzi na ọnụahịa ndị ahụ. Iwu ga-amalite mbupu na June, mgbe mkpọsa ahụ na-amalite Machị 31 ruo na Eprel 31.
A na-eme ìgwè ọ bụla Ottm 100% ezigbo osisi kedu ihe ọ bụ Tung mmanụ maka ire ụtọ, na ọ na-agwụ n'aka. N'ihi na nhazi nke ndị agha ahụ sitere na eriri elekere Switzerland, ị nwere ike itinye ma ọ bụ wepu nko iji mee ka mmachi ahụ dabara nkwojiaka gị.
Ndị nwe Apple Watch abụghị naanị ndị ọrụ smartwatch nwere ike irite uru. Emekwara Ottm maka Android Wearyana maka Ogwu.
Uru ọzọ bụ na oge ọ bụla mmadụ tinyere ego ha na Ottm na Indiegogo, ụlọ ọrụ ahụ na-akụ osisi na oke ọhịa nke British Columbia. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịkwado Ottm, ị nwere ike nyochaa mkpọsa Indiegogo na anyị ga-ahapụ gị na njedebe nke isiokwu ahụ wee hụ nhọrọ ndị dịnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Ottm Apple Watch straps ka ejiri 100% osisi mee
Apple Campus 2 Eprel Video dị ugbu a